ဓာတ်ပုံတွေကို crop လုပ်သင့်သလား? - Featured Collectives
Cropping, Featured Collectives, Street Photography, StreetPhoto_bw, StreetPhoto_Color, Thi Ha Thu, THT
ပုံတွေကို ဖြတ်တောက်ခြင်း (cropping) က ပိုကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်လာစေသလား။
ဥပမာ Henri Cartier-Bresson ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ပါ။
<(c) Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos / FRANCE. Paris. Place de l’Europe. Gare Saint Lazare. 1932.>
ဓာတ်ပုံကို ဖြတ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက နံရံမှာရှိတဲ့ အပေါက်ထဲကနေ ရိုက်လို့ပါတဲ့။
Gare Saint Lazare ဘူတာရုံနောက်ဘက် အလုပ်ရုံပတ်ပတ်လည်မှာ သစ်သားခြံစည်းရိုးရှိတယ်။ ခြံစည်းရိုးကြားထဲ ဟနေတဲ့အပေါက်ကနေ ကင်မရာနဲ့ ချောင်းကြည့်နေတုန်း လူတစ်ယောက် ခုန်လိုက်တယ်။ ခြံစည်းရိုးကြားက အပေါက်ဟာ ကျနော့်မှန်ဘီလူးအတွက် သိပ်မကျယ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ – Henri Cartier-Bresson
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဒီပုံကို သူ ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖြတ်လိုက်တာက ပုံကို ပိုကောင်းသွားစေတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
Elliot Erwitt ရဲ့ တော်တော်ကြီးကို ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခု။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ပုံတွေအားလုံးကို ဖြတ်တောက်သင့်သလား။
ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ဖြတ်တောက်ပြီဆိုရင် ဒါဟာ ဂျီသြမေတြီအချိုးကျခြင်း သေဆုံးတာပါပဲ။ နောက်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ မဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို အမှောင်ခန်းထဲမှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ မြင်ကွင်းတည်ကြည်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ – Cartier-Bresson
ယေဘုယျအားဖြင့် မဖြတ်တောက်သင့်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းက သင့်ကို ပျင်းရိတဲ့ ဓာတ်ပုံသမားတစ်ဦးဖြစ်စေတယ် (အနည်းဆုံးတော့ ကျနော့်ကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်)။ မဖြတ်တောက်ဖို့ သင်ယူခြင်းအားဖြင့် လမ်းတွေပေါ်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ရိုက်ပြီး အိမ်ရောက်မှ အထားအသိုကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ထက် ရိုက်နေတုန်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အထားအသို မှန်ကန်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
ဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Walker Evans ရဲ့ အမြင်
ဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Walker Evans က အောက်ပါအတိုင်းပြောပါတယ်။
Alfred Stieglitz ဆိုရင် ပုံရဲ့ တစ်လက်မရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံတောင် ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ကတော့ ပိုကောင်းတဲ့ပုံရဖို့ ပုံရဲ့ ဘယ်နှစ်လက်မဖြစ်ဖြစ် ဖြတ်မှာပဲ။ – Walker Evans
ဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Robert Frank ရဲ့ အမြင်
Robert Frank ဟာ သမိုင်းမှာ အင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ ဓာတ်ပုံသမားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံသမားတွေ သိပ်မသိကြတာက Robert Frank ရဲ့ နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံအတော်များများဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ ပုံတွေဆိုတာပါပဲ။
Frank လုပ်ခဲ့တာဟာ အဲဒီအချိန်က အစွန်းရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ ပုံတွေကို ဖြတ်တောက်တာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြတ်တောက်ပြီး တစ်ခါတစ်လေတော့ နည်းနည်းပါးပါးပဲ ဖြတ်တယ်။
၁၉၅၇ နွေဦးရောက်တော့ Frank ဟာ သူ့ရဲ့ ပုံတစ်ထောင်လောက်ကို တစ်ရာလောက်အထိ လျှော့ချလိုက်ပြီး ပုံအသစ်ပြန်ကူးတယ်။ အဲဒါတွေကို ဖြတ်တောက်ဖို့ သေသေချာချာ စဉ်းစားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဖလင်နက်ဂတစ် တစ်ခုလုံးကို သုံးတယ်။ Trolley – New Orleans ဆိုတဲ့ ပုံလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့် ဖလင်နက်ဂတစ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ကိုပဲ ပြတယ်။
“Looking In” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ Frank ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ပုံအချို့ကို ပြထားတယ်။
City Fathers – Hoboken, New Jersey ဆိုတဲ့ပုံမှာ ညာဘက်အစွန်ဆုံးက ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေတဲ့ ပုံရိပ်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ Political Rally – Chicago ဆိုတဲ့ပုံမှာ ပွဲလာတက်သူနောက်က လက်ဝါးကပ်ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ Jehovah’s Witness – Los Angeles ဆိုတဲ့ပုံမှာ တရားဟောဆရာကို အလေးပေးလိုက်တယ်။ Luncheonette – Butte, Montana ဆိုတဲ့ ပုံမှာ ပိုစတာတွေနဲ့ ဘိလိယက်ခုံကိုပဲ ပြအောင် ဖြတ်လိုက်တယ်။ Elevator – Miami Beach ဆိုတဲ့ပုံမှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးနဲ့ Convention hall – Chicagoမှာ စကားပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပိုအလေးပေး ဖော်ပြတယ်။
Political Rally ဆိုတဲ့ပုံကို ဖြတ်တောက်ထားပုံ။ ပုံကို သူဘယ်လိုဖြတ်တောက်သလဲဆိုတာကို အနီရောင်ခဲတံနဲ့ ပြထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
City Fathers – Hoboken, New Jersey ဆိုတဲ့ ပုံရဲ့ မဖြတ်တောက်ရသေးမီ မူရင်းရိုက်ကွက်။
City Fathers – Hoboken, New Jersey ဖြတ်တောက်ပြီးသော ပုံ။ ညာဘက်အစွန်းက လူပုံကို ဖြတ်ထားတာကို သတိပြုပါ။
Frank ရဲ့ နာမည်ကျော် “Elevator girl” ရိုက်ကွက်။ မဖြတ်တောက်ရသေးမီပုံ။
Frank ရဲ့ “Elevator girl” ဖြတ်တောက်ပြီးနောက် ပုံ။ အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ကို အလေးပေးနိုင်ဖို့ ပုံကို ဘယ်လိုဖြတ်တောက်လိုက်သလဲဆိုတာကို သတိပြုပါ။
Frank ရဲ့ နာမည်ကျော် “Rodeo” မဖြတ်တောက်ရသေးမီ ရိုက်ကွက်။ Frank ဖြတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ နေရာအား အပြာရောင် ခဲတံနဲ့ မှတ်ထားတာကို သတိပြုပါ။
Frank ရဲ့ “Rodeo” ဖြတ်တောက်ပြီး ပုံ။ မူလပုံရဲ့ ဘယ်နဲ့ညာဘက်က အမြင်ရှုပ်စေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တာကို သတိပြုပါ။
Frank ရဲ့ အချို့သော ဖြတ်တောက်မှုတွေဟာ တော်တော်ကို ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Hotel Lobby – Miami and Movie Premiere – Hollywood နှစ်ပုံဆိုရင် အလျားလိုက်ရိုက်ကွက်ကနေ ဒေါင်လိုက်အဖြစ် ဖြတ်လိုက်တာပါ။
Frank ရဲ့ နာမည်ကျော်တွေထဲက တစ်ပုံဖြစ်တဲ့ ကပွဲတစ်ပွဲကဓာတ်ပုံ။ မူလက အလျားလိုက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ။ ဒေါင်လိုက်ဓာတ်ပုံအဖြစ် ဖြတ်လိုက်တယ်။
စာအုပ်ထဲမှာ ပုံတွေကို စီစဉ်ခြင်းနဲ့ နမူနာစာအုပ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အလိုလိုသိစိတ်အတိုင်းပဲ လုပ်တယ်၊ စာအုပ်အခန်းတိုင်းအတွက် ကြိုတွေးထားတာ မရှိဘဲ စာအုပ်ကို စီစဉ်တယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို စားပွဲတွေပေါ်၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်နဲ့ နံရံတွေမှာ ကပ်ပြီး စီတယ်။ သူလုပ်နေတုန်း စည်းမျဉ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ရွေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံဟာ ဖလင်လိပ်တစ်လိပ်ထဲကလာတာဆိုရင် အဲဒီထဲက အစဉ်အတိုင်း ပုံကို စီတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ နမူနာစာအုပ်လုပ်တယ်။ ၈ ၃/၈ လက်မနဲ့ ၉ ၁/၂လက်မ။ ရွေးထားတဲ့ ပုံ၉၂ပုံကို မိတ္တူကူးထားတာတွေနဲ့။
မှတ်သားရန်။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဖြတ်တောက်တာကို သိပ်နှစ်သက်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ Robert Frank သူ့ရဲ့ ပုံတွေကို ဖြတ်တောက်တာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ တစ်ချို့ဟာဆို တော်တော်ကို ဖြတ်ထားတာ (အလျားလိုက် ရိုက်ကွက်ကို ဒေါင်လိုက်ပုံအဖြစ် ပြောင်းတာမျိုး)။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ပိုအားကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကို ပိုအာရုံစိုက်အောင်လုပ်ပါ၊ အမြင်ရှုပ်စေတာတွေကို ဖယ်ထုတ်ပါ၊ သင့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဖြတ်တောက်ပါ။
Erick Kim ရဲ့ Should I Crop My Photos? ကို THT မြန်မာပြန်ဆိုသည်။ Eric Kim သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ street photographer တစ်ဦးဖြစ်ပြီး http://erickimphotography.com/blog/ တွင် street photography နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးများ၊ အင်တာဗျူးများကို ရေးသားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန် – THT